Hoggaamiyihii hore ee maleeshiyada Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo lagu xiray magaalada Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHoggaamiyihii hore ee maleeshiyada Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo lagu xiray magaalada Baydhabo
Hoggaamiyihii hore ee maleeshiyada Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. [sawir Hore]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii hore ee maleeshiyada Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayaa maanta oo Khamiis ah lagu xiray magaalada Baydhabo, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo deegaanka ah.
Ciidamada Itoobiya oo katirsan howlgalka Midowga Afrika Amisom ayaa xiray Roobow, sida ay ilo-wareedyadu intaas ku dareen.
Roobow oo sanadkii hore sheegay in uu ka baxay maleeshiyada Al-Shabaab, ayaa hada u tartamayay madaxweynenimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxa uu diiday go’aanka Dowladda Federaalka Soomaaliya, isaga oo ku adkeystay in uu u tartamayo xilkaas.
Gudaha magaalada Baydhabo ayaa laga maqlayaa rasaas kadib xariga Roobow.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 19-ka bishaan December.
October 6, 2018 Roobow oo iska indho-tirayaa go’aanka Wasaaradda Amniga DFS ee ka mamnuucaya doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed